Idaacadda Iswiidhen laanteeda caalamiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Idaacadda Iswiidhen laanteeda caalamiga
Publicerat tisdag 27 maj 2008 kl 09.27
Idacadda Iswiidhen (SR), waa mid ka madax bannaan bayacmushtarka iyo siyasadda. Waa heyad u adeegta bulshada, hoowshedu tahey diyaarinta barnamijyo tayo leh ee xiisa geliya dhageysteyaasha dhammaantood, iyada oo aan loo kala aaba- yeeleyn da’da, jismiga, dhaqanka iyo qowmiyadda uu ruuxu u dhashey.
Idaacadda calamiga ah ee Raadiyaha iswiidhen (SR International), waa laan Idaacadda Iswiidhen u matasha dhanka caalamiga iyo dhaqammada kala duwan, hoowsheduna tahey sidey Iswiidhen uga war bixin laheyd
Idaacadda Iswiidhen laanteda caalamiga (Sri) waxey wararkeeda ku baahisaa 13 luuqadood ee kala duwan.
Barnaamjyada ku baxa luuqadaha albaanka, carabiga, asiiriyaanka/siiriyaanka, bosniyaanka/karuweyshiyaanka/serbiga, ingiriiska, kurdishka, beershiga iyo luuqadda soomaaliga ayaa ka caawiya is fahanka dhaqammada kala duwan, xoojinta habka is dhexgalka, gaar ahaan kolka laga hadleyo soo galootiga dalka ku cusub.
Barnaamijka ku baxa luuqadda bulshada laga tirada badan yahey ee roomiga, ayaa looga gol leeyahey sidii loogu xoojin lahaa dhaqanka iyo luuqadda bulshada roomiga ee ku dhaqan dalkan Iswiidhen. Dhammaan barnaamijyadaa waxey ka baxaan mowjadda P2 ee dalka dhammaantii gaara iyo mowjadda FM-ka ee 89.6 ee laga dhageysan karo magaalada Istockholm iyo nawaaxigeeda.
Sidoo kale barnamijyada carabiga, kurdiga, asiiriyaanka, beershiga iyo roomiga ayaa laga baahiyaa mowjadda gaaban (barnaamijka luuqadda roomiga ku baxa waxaa intaa u dheer in laga dhageysan karo mowjadda dhexe) ee Yurub iyo barriga dhexe.
Idaacadda calamiga ah ee Raadiyaha Iswiidhen waxey kaloo leedahey barnaamijyo loogu tala galey dhageysteyaasha caalamiga, waa dalka dibaddiisa (Raadiyo Iswiidhen), taasoo u adeegta iswidhishka dalka dibadiisa ku dhaqan iyo weliba in ciddii xiiseeneysa lagu wargeliyo xaaladda dalka iyo nolosha bulshada iswiidhishka. Barnaajiyadaa waxey ku baxaan afafka iswiidhishka, ingiriiska, jarmalka?, ruushka iyo beelaruushka.
Barnamijyada ka baxa Raadiyo Iswiidhen ayaa laga dhageysan/dalacan karaa, mowjadaha gaaban iyo dhexe, aaladda warbaahinta ee dayaxgacmeedka, internetka iyo waxa loo yaqaan podraadiyo.
Barnaamijyadeenu waxey socdaan 30 daiiqadood markiiba, marka laga reebo podraadiyaha lanta jarmalka ee yeelan karta qaabab kala duwan.
Saacadaha ey arnaamijyadu baxaan iy moowjadaha ey ka baxaan, waxaad ka heli kareysa bogga internetka ee luuqaddaada.